Isu tatova neinoshamisira nyowani iPad Pro ine M1 processor | Ndinobva mac
Isu tatova neinoshamisira nyowani iPad Pro ine M1 processor
Yokutanga Keynote ye2021 uye chokwadi ndechekuti yakatisiya tese tisingatauri nemidziyo iyo Apple yaive yakaviga, uye izvo zvakazopedzisira zvabuda pachena.
Kunze kubva kune yakawanda-runyerekupe AirTag, pane pasina mubvunzo pane maviri matsva madhizaini anozoratidza nguva pakambani yeCupertino. Imwe yacho ndeye inoshamisa iMac yenguva nyowani Apple Silicon. Uye imwe yacho ndiyo nyowani nyowani iPad Pro uyo anowanawo paApple Silicon chitima. Ehe, hongu, iyo iPad ine M1 processor. Hapana kana chinhu.
Apple ichangobva kuburitsa pachiitiko chaicho chakapera maminetsi mashoma apfuura chizvarwa chinotevera iPad Pro ine imwechete M1 chip yatiri kutoziva kubva pakutanga Apple silicon, Thunderbolt uye USB4 rutsigiro, 5G kubatana pane maLTE mamodheru uye zvimwe zvakawanda zvehunyanzvi hunyanzvi, senge mini-LED skrini.
Apple yakave nechokwadi mune chakataurwa chirevo chekuti iyo M1 processor mune nyowani iPad Pro inopa inosvika makumi mashanu muzana kuvandudza mashandiro zvichienzaniswa nezera rapfuura. Yayo yakasanganiswa 50-musimboti GPU inopa inosvika makumi mana% nekukurumidza mifananidzo kupfuura iyo yapfuura chizvarwa. Iyo itsva iPad Pro inowanikwa neinosvika 2 TB chengetedzo, peta muganho wekare.
Iyo TrueDepth Kamera system pane iyo iPad Pro inoratidzira nyowani 12-megapixel Ultra-yakafara kamera iyo inogonesa iyo 120-degree ndima yekuona ye "Centre Stage«. Inochengeta furemu kunyangwe iwe ukafamba, yakatarisana nemufananidzo wakatorwa.
M1 processor uye mini-LED kuratidza
Iyo itsva iPad Pro ine M1 processor. Zvine utsinye.
Iyo nyowani 12,9-inch iPad Pro inouya neiyo nyowani skrini Liquid Retina XDR, iine anosvika chiuru nits dzechiedza chizere-kupenya uye 1.000 nits yekukwirisa kupenya. Iyo inoratidzira ine zviuru gumi zveMini-maUS, ine Ultra-yakakwira musiyano muyero we1.600: 10.000. Ichi chiratidzo chitsva chinogumira kune 1.000.000-inch modhi uye hachiwanikwe pane iyo 1-inch modhi.
Mitengo yeiyo nyowani 11-inch iPad Pro inotanga pa 879 Euros, apo iyo nyowani 12,9-inch iPad Pro inotanga pa 1.199 Euros. -Pamberi-mirairo ichatanga muna Kubvumbi 30, hunowanikwa huchitanga hafu yepiri yaMay.
Apple yakazivisawo kuti yakasarudzika Magic Keyboard yeIdad Pro ichavhura mune nyowani Ruvara chena. Panga pasina mareferenzi kune zvingangodaro zvitsva Apple Pencil kupenya kwakagadzirwa, sezvakange zvakafungidzirwa mazuva mashoma apfuura.
Iyo iPad ine simba re M1 processor Inoisimudzira padanho repamusoro zvakanyanya kupfuura chero laptop pamusika nhasi. Chikara, pasina kupokana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Isu tatova neinoshamisira nyowani iPad Pro ine M1 processor
Iyi ndiyo iMac nyowani ine M1, dhizaini inoshamisa, mavara uye nezvimwe!